3D सेक्स खेल वृद्धि भएको छ हाल । म कुनै विचार छ किन कि छ, तर हामी मात्र अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ. शायद यो आफ्नो छाला टोन, शायद यो बाटो आफ्नो यौन कार्यहरू छन् एनिमेटेड, वा शायद यो कुरा पूर्ण else. It doesn ' t even matter. के कुरा गर्छ भन्ने तथ्यलाई छ. यी खेल पक्कै एक अधिक व्यावहारिक अनुभव तुलना, ती 2D खेल मान्छे सामान्यतया खेल्न ।
स्तन सकिन्छ exaggerated, र तिनीहरूले छौँ अझै पनि राम्रो हेर्न. बिल्ली अचम्मको देखिन्छ, गधा छन् विशाल र अत्यन्तै, र तिनीहरूले हेर्न रसिला as well. र लगभग मान्छे, आफ्नो कुखुरा सधैं राम्रो हेर्न छ, र कुनै कुरा कसरी ठूलो तिनीहरूले छन्, तिनीहरूले फिट छ । मलाई लाग्छ कि यी 3D खेल बस पूरा मानिसहरूको इच्छा र कल्पनामा पनि sickest व्यक्तिहरूलाई.
किन कि म एक ठूलो खेल लागि तयार, आज तपाईं र म तिमीलाई यो प्रेम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. यो खेल मा, तपाईं चयन गर्न सक्छन्, आफ्नो लिङ्ग, र त्यसपछि तपाईं चयन गर्न सक्छन् आफ्नो साथी as well. निस्सन्देह, कि पछि, you need to जवाफ प्रश्न को एक जोडी, तर त्यसपछि तपाईं गरेको छौं. तपाईं मुक्त छौं खेल्न । निस्सन्देह, तपाईं परिमार्जन गर्न सक्छन् आफ्नो साथी रूपमा राम्रो, र तपाईं छनौट गर्न सक्नुहुन्छ fuck अधिक मान्छे, छैन भनेर एक व्यक्ति । यो छ ताकि तिनीहरूले देख्न सक्छौं के तपाईंको प्राथमिकताहरू छन् । , र यो रोचक कुरा छ कि विपरीत अन्य 3D खेल, यो एक छ एक बहु विकल्प, जो तपाईं गर्न सक्छन् भन्ने अर्थ यो आनन्द खेल मा अन्य मान्छे संग रूपमा राम्रो तरिकाले. तपाईं प्रदर्शन गर्न सक्छन् विभिन्न सेक्स कार्यहरू जस्तै, मुखमैथुन, योनी सेक्स, गुदा सेक्स, र अरू सबै कुरा आफ्नो मस्तिष्क कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ।
खेल्न चाहनुहुन्छ, धेरै मान्छे? कुनै समस्या, पनि राम्रो छ । पाउन दुई खेल साझेदार गर्न सक्छन् भनेर तपाईं एक केटी मा sucking आफ्नो पागल छौं जबकि fucking अर्को केटी as well. साधारणतया, यो एक सपना जस्तै कि अचानक एक वास्तविकता भए, र there ' s no going back. तपाईं एक पटक यो खेल खेल्न, you ' ll be चिह्नित लागि जीवन । असंख्य र असंख्य घण्टा भएको अचम्मको सेक्स अनलाइन, परिमार्जन आफ्नो वर्ण र आफ्नो साझेदार रूपमा राम्रो तरिकाले. परिवर्तन गर्न चाहेको उनको boob आकार? गरेको । बनाउन चाहनुहुन्छ उनको रसिला गधा र गधा गाला पनि ठूलो? तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ कि as well., कुनै सीमा छन् यहाँ, र तपाईं मुक्त छौं बन्न सम्राट को आफ्नो यौन साम्राज्य छ ।
अर्को एउटा ठूलो कुरा यो छ कि तपाईं चयन गर्न सक्छन् विभिन्न सेटिङ पनि । If you want to fuck आफ्नो छिमेकीलाई, तपाईं यो गर्न सक्छन् । तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मालिकहरुलाई पत्नी, त्यो समस्या छैन या त. You can also choose to fuck विभिन्न प्रसिद्ध कार्टून वर्ण, र तपाईं संग मजा को एक राम्रो राशि तिनीहरूलाई एकै समय छ । मूलतः, यो कुरा छैन, र जो तपाईं चयन, तपाईं यो गर्न सक्छन् । पनि आफ्नो काल्पनिक चचेरे छैनन् प्राप्त गर्न असम्भव! विपरीत अन्य 3D खेल, यो एक छ बिल्कुल शून्य सीमा, र तपाईं मुक्त छौं unleash गर्न भनेर जंगली यौन पशु भनेर तपाईं तपाईं को भित्र.
भने पनि आफ्नो पत्नी वा प्रेमिका खोजिरहेको छ दबाउन यो । म यो छ कसरी थाहा, किन कि म बस तिमीलाई पाउन आफ्नो साँचो उद्देश्य र fuck whoever र however you want. बस किनभने म गर्न असमर्थ थियो सम्म यो म भर मा आयो यो खेल. खैर, अब म छु साझा मेरो ज्ञान, तपाईं संग म छौँ पास मा केही their questions. र आफ्नो अवस्था लागि यो खेल खेल पनि । निस्सन्देह, तपाईं अठार वर्ष पुरानो छ, जो यो नियम अन्य 3D games as well.
कि पछि, तिनीहरूले जा छौं सोध्न तपाईं हो तपाईं संग ठीक वर्चस्व भन्दा महिलाहरुको, र कि तपाईं संग ठीक छौं चरम सेक्स as well. तर, यदि तपाईं यो पढ छौं, मलाई थाहा छ कि मेरो छौं मानिस र यो पनि छैन चरण you. तिनीहरूले पनि सोध्नुहोस् कि तपाईं कुनै पनि लक्षण वा रोग वा दौरा शामिल हुन सक्छ कि कारण यो खेल खेल. पछि तपाईं स्पष्ट ती सबै प्रश्नहरू, तपाईं बस साइन अप. एक मुश्किल र कष्टप्रद कुरा छ भनेर तिनीहरूले छौं सोधेर, आफ्नो देश को लागि र आफ्नो जिप कोड. Don ' t worry. They ' re not going to share this with अरू कसैलाई., यो सिर्फ केही निजी डाटा तिनीहरूले सङ्कलन गर्न आवश्यक. विशेष गरी खेल किनभने शायद केही भुक्तानी, सिर्फ मामला मा, तपाईं चाहनुहुन्छ भने केही विशेष कुराहरू, वा बस केही भत्तों र विशेष उपचार मा सामान्य.
कसरी यो सबै को लागि काम गर्दछ 3D सेक्स गर्दै खेल वास्तवमा लायक केहि विशेष गरी भने, तिनीहरूले राम्रो यौन कार्य as well. I mean, if you ' re already लागि देख ठूलो खेल, तपाईं हुन सक्छ, साथै सबै बाटो जाने, र पाउन सबै भन्दा राम्रो कुरा हो । Even if it requires केही भुक्तानी, सही? केवल सबै भन्दा राम्रो लागि मेरो प्रशंसक छ । यदि यो रोचक ध्वनियां, तपाईं हुन सक्छ, साथै यो खेल खेल्न तुरुन्तै ।
म भन्दै छु किनभने यो, एक पटक फेरि, यो विशेष गुणहरू । पहिले पनि तपाईं सुरु गर्न खेल्न, तपाईं देख्न सक्छौं के खेल जस्तै देखिन्छ मा सामान्य. तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूले कसरी चेतन विभिन्न genders, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ के को प्रकारको बालिका तपाईं यहाँ भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, र पाठ्यक्रम, तपाईं तुरुन्तै देख्न सक्छौं के fucking जस्तै देखिन्छ. किनभने यो एक राम्रो-ज्ञात वास्तवमा भन्ने हामी सबै यहाँ भेला लागि भनेर धेरै नै कारण हो । तपाईं हुनुहुन्न भने साधारण चासो मा आफ्नो समय बर्बाद खेल मा, तपाईं पाउन छौँ कि यो खेल अत्यधिक प्रबल, लगभग जहाँ बिन्दु गर्न यो अत्यधिक लत छ । , किन कि म सल्लाह गर्न चाहनुहुन्छ सबै को तपाईं सावधान हुन संग 3D खेल छौं किनभने छैन एउटा सजिलो कुरा गर्न बकवास संग.
यदि तपाईं पहिले नै निर्णय गर्न यो खेल खेल्न, तपाईं रही छौं के थाहा मा, र छैन मलाई आउन पछि रो किनभने आफ्नो डिक दुखाइ. म भाव थाह! तपाईं हुन सक्छ, साथै बस यो सजिलो लिनुहोस्, र subtly गोता मा, यो किनभने यो हुनेछ कि सामग्री गरेको going to change your life forever. यो राम्रो बाँच्न 21 औं शताब्दीमा, जहाँ हामी यी महान कुराहरू वरिपरि । You might as well complaining रोक्न, र यो आनन्द किनभने तपाईं शायद पछि मलाई धन्यवाद ।
तपाईं खेल्न यो अन्य मान्छे संग
ग्राफिक्स राम्रो हो
वर्ण धेरै छन्
धेरै विज्ञापन छ ।
अधिक साइटहरु यस्तै 3D Sex Games